USekgota unikwe inombolo edunyiswe uShabba kwiChiefs
July 9, 2021 July 10, 2021 Impempe.com
UKgaogelo Sekgota, ongomunye wabadlali abasha abethulwe yiKaizer Chiefs ngoLwesihlanu ntambama, unikezwe inamba enomlando omuhle kuleli qembu laseNaturena.
IChiefs imemezele uSekgota, Njabulo Ngcobo, Sifiso Hlanti, Sibusiso Mabiliso, Brandon Petersen noPhathutshedzo Nange, njengabadlali esibasayinisile.
Laba badlali abayisithupha bayingxenye yezinhlelo zeChiefs zokulungiselela isizini entsha. IChiefs ayibanga nesizini enhle kule esanda kuphela njengoba nakwiTop 8 ingene sekuvalwe amehlo.
Isizini yayo beyibheda ngale ndlela yokuthi ize yaxosha obengumqeqeshi, uGavin Hunt, sekusele imidlalo emibili isizini isongwe. Kube sekuqashwa uStuart Baxter osebuya isibili kwiChiefs esikhundleni sakhe. Nokho uHunt wayishiya yenza kahle kwiCAF Champions League lapho seyihambe yaze yafika kowamanqamu.
Kuzokhumbuleka ukuthi iChiefs ayikwazanga ukusaniyisa abadlali abasha ngaphambi kokuqala kwesizini edlule. Lokhu bekungenxa yokuthi ibisesigwebeni seFifa eyasithola ngemuva kokungahambisi kahle isayina uHasina Adrianarimanana waseMadagascar.
Isikhombisile ke ukuthi beyikunxanelwe ukusayina abadlali njengoba yethule abayisithupha esibasayinisile ngoLwesihlanu ntambama. USekgota, obegijima kwiSwallows FC noNgcobo noHlanti, uzogqoka unombolo 14 kwiChiefs.
BOBBY MOTAUNG: Sinethemba lokuthi nalaba badlali bazokujabulela ukuba lapha futhi bazosiza ekubuyiseni injabulo kwizigidi zabalandeli beqembu
Le nombolo esinikwe uSekgota, beyigqokwa nguSiphiwe Tshabalala owahlala iminyaka engaphezu kweshumi kwiChiefs ngaphambi kokuthi qu phesheya kwezilandle. Uthe uma ebuya wasayina kuMaZulu lapho abedlala khona ngesizini edlule.
UTshabalala wazakhela igama ngeNdebe yoMhlaba ngesikhathi eshaya igoli elihle emdlalweni wokuqala iBafana Bafana ibhekene neMexico. Le nombolo ayizange ibanjwe muntu kusukela ashiya kwiChiefs kumasizini amathathu edlule.
NjengoShabba, uSekgota naye uyinxele futhi unomjiko osheshayo obheke phambili. Futhi muhle nasekukhahleleleni ipali, nakuma-free kick. Ukukhombisile lokhu esekwiBidvest Wits neSwallows.
Imenenja yeChiefs, uBobby Motaung, ithe bajabule ngalaba badlali abasha, wethembisa ukuthi abakaqedi kukhona abanye abadlali abasaxoxisana nabo noma amaqembu abo.
“Siyabemukela abadlali abasha kwiKaizer Chiefs. Sinethemba ukuthi abalandeli bethu bazojabula ngalaba badlali abasha ngoba kade babesicela ukuthi sibathole.
“Sinethemba lokuthi nalaba badlali bazokujabulela ukuba lapha futhi bazosiza ekubuyiseni injabulo kwizigidi zabalandeli beqembu, ngokuthi badlale kahle basize iqembu liwine izindebe.
“Besilokhu sibalandela laba badlali futhi sibabonile benza kahle ngesizini edlule. Sithemba ukuthi bazokwengeza izinga namava kulesi sikwati esinaso,” kusho uMotaung.
Omunye wabadlali Impempe esike yabika ukuthi iChiefs iyamfuna ngu-Austin Dube odlala emuva weRichards Bay. UDube njengamanje ukwiBafana Bafana edlala kwiCosafa Cup njengamanje. Ngokuthola kwethu izingxoxo seziqalile sekushoda kube nesivumelwano phakathi komdlali neChiefs ngaphambi kokuthi kuqedwe yonke into.
Negama likaKhanyisa Mayo wayo iRichards Bay, selike lavela uma kukhulunywa ngabadlali abafunwa yiChiefs. Ngaphezu kwalaba abayisithupha, iChiefs ibuyise noGiven Thibedi ebimbolekise kwiSwallows FC ngesizini edlule.
FUNDA NALA: IPirates isaqhubeka nokuxebula umkhoma kwi-Arrows njengoba seyifuna abadlali bayo
Bekungekhona ke ukuthanda kwayo okwenze ibolekise ngaye kodwa bekungenxa yokuthi naye beyingeke ikwazi ukumbhalisa kwiPremier Soccer League kwazise wayekade evele ebolekisiwe ngesikhathi iChiefs igwetshwa ngokungasayinisi mdlali.
UThibedi yena uzogqoka unombolo 13, uNgcobo yena uzothatha unombolo 27. UMabiliso uzogqoka unombolo 26, kuthi uPetersen athathe unombolo 16 owawugqokw anguBrian Baloyi kudala. UNange yena unikwe unombolo 24, UHlanti uzothwala unombolo 23 bese uNange yena agqoke unombolo 24 owadunyiswa nguDavin “DVD” Mathebula.
Previous Previous post: ‘Ibhoza yaseMboka’ isifuna ukuswenka ngenkanyezi kweleChiefs
Next Next post: ISundowns iqinise iqembu elivele liyinqanawe, isazobusa kuleli?